Danjire Nicholas Kay & wafdi uu horkacayo oo ka degay Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jowhar – Mareeg.com: Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wafdiga danjire Kay ayaa waxaa garoonka kubbadda cagta ee xaafadda Kulmis ka dejisay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah (Helicopter), waxaana loo sii gudbiyay Xarunta Xiriirka Shaqaalaha oo horay loogu sii diyaariyay.
Sida laga soo xigtay xubno ka mid ah maamulka degmada Jowhar, waxaa wafdiga danjire Kay ka mid ah mas’uul ka socota hay’adaha UNICEF, UNDP, UNOCHA iyo FAO.
Waxaa wafdiga Jowhar kusoo dhaweeyey maamulka gobolka Shabaallaha Dhexe iyo qaar ka mid ah bulshada degmada Jowhar.
Danjire Nicholas Kay iyo wafdiga la socda ayaa markii uu gaaray Jowhar durba shir albaabadu u xiran yihiin la galay mas’uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana lagu wadaa inuu sidoo kale la kulmo qeybaha bulshada.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa aad u adkeeyey amaanka magaalada Jowhar, halkaasoo ka mid ah gobollada ugu amaanka badan koonfurta dalka Soomaaliya.
Lama sheegin sababta uu Nicholas Kay u tegay Jowhar, ahse ahaatee wuxuu horay u booqday qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyne ee dalka Soomaaliya.